Dirk Fassbender Panther POPNUMXD nke Autopilot
ajụjụ Dirk Fassbender Panther POPNUMXD nke Autopilot
1 afọ 3 ọnwa gara aga #737 by Pierre B
M rụrụ ọrụ na Panther (Copter) mmepụta simulator na Prepar 3D 3.2 (ngwanrọ mgbagharị). Enwetara m mbipute mbụ nke Dirk Fassbender Autopilot wee malite imelite. Ihe niile dị mma.
Enwere m ike ịkwanye ụdị ụzọ autopilot na module Autopilot.
Ma ugbu a, m chọrọ ịmepụta ụdị ụzọ Autopilot ozugbo na P3D. Amaghị m otú arụmọrụ a si arụ ọrụ.
Mgbe m budatara HC075DI_FSX_COUGAR_AUTOPILOT.zip m hụrụ na n'ime e nwere faịlụ a na-akpọ afcp.cfg. N'ime faịlụ a enwere codekeys dị iche iche iji kpalie ụdị ụzọ dị iche iche nke Autopilot.
Agbalịrị m ijikwa ụdị ụzọ autopilot site na codekeys dị na afcp.cfg ozugbo na P3D mana enweghi mmetụta ọ bụla.
Onye nwere echiche otu esi eme?
1 afọ 3 ọnwa gara aga #748 by Pierre B
Ihe ọjọọ m, Achọrọ m ịmegharị ụdịrị autopilot dị iche iche na mkpirisi ụzọ mkpirisi igodo na koodu igodo.
Oge ike page: 0.871 sekọnd